Read More / Sii akhri Habka Cusub Ee Shirko-dulaasha Iyo Siyaalaha Ay Ganacsatada Tanadland Uga Faa'iideysan Karaan.
31 Dec 2010 Labdii todobaad ee ina dhaafay waxay qalabka warbaahinta ee caalamku baahinayeen in shirkadda (Groupon) ay gadatay shirkadda caanka ah ee (Google). qiimaha ay ku gadatayna uu yahay $ 2.5 bilyan [billion]. shirkadda (Groupon) ninka iska leh oo ah [Andrew Mason] hal sano iyo shan bilood horteed wuxuu ahaa nin camal laawe ah. waxaana shaqo u ahayd hawl wax nacfi ahi uusan ka soo gelin oo ah u ol'olaynta xaquuqda dadka wax iibsada ee macaamiisha u ah shirkadaha. wuxuuna jaale [Andrew Mason] wax ku qori jirey webkiisa [www.ThePoint.com]. wixii ugu horeeyey ee uu sameeyeyna waxay ahayd in uu webkiisa shaac bixiyo ilaa ay noqotay meel dad badani ay ku xiran yihiin, laguna bartay in ay tahay gole looga ol'oleeyo laguna difaaco xaquuda dadka iibsadeyaasha ah. markii xigteyna wuxuu bilaabay intuu dadkii abaabuley in uu la xiriiro shirkadaha waaweyn ee macaamiisha badan leh. wuxuuna isagoo ka wakiil ah macaamiisha shirkaddaha ee isaga ku xiran uu shirkadaha ugu goodiyi jirey in hadii aysan arimaha ay macaamiishu ka cawdaan aysan wax ka bedelin, in ay qaadi doonaan ol'ole wax weyn u dhimidoona sumcadda iyo daqliga shirkadda oo dadka looga digayo in ay la macaamilaan inta ay ka tanaasuleyso iibsadeyaashu waxa ay ka cabanayaan.[Andrew Mason] markii uu fahmay awooda ay leeyihiin dad yar oo sheeganaya in ay yihiin urur metala dadka shirkaddaha iyo ganacsatada macaamiisha u ah ee wax ka gata, ayuu wuxuu bilaabay qorshe kale oo u nacfi ka soo gelayo meherad uu ku shaqaystana u noqon kara. [Andrew Mason] wuxuu xiriir la sameeyey shirkadihii uu xiriirka la lahaa markaan isagoo shirkaddiisa magac u yaalka ah ee (Groupon) ka wakiil ah, qorshihiisuna wuxuu ahaa in uu macaamiisha shirkaddaha uu siyaadin doono hadii ay shirkadduhu isaga ku wareejiyaan socodsiinta Coupon -ka shirkadduhu ay bixiyaan. shirkaddaha yar-yar sida dukaamada, maqaayadaha faracyada badan leh iyo shirkaddaha waaweyn daa'iman waxay bixiyaan Coupon. taasoo ah hab qiimo dhimis ah oo ay shirkadduhu macaamiisha ku soo jiitaan iskuna taageeraan.Sida qaalibka ahna Coupon-ka ugu qiimo dhimista badan waxaa sameeya shirkaddo gaashaanbuur ah. metalan shirkadda korontada, shirkad kuwa isgaarsiinta ah, shirkad kuwa badroolka ah, shirkad kuwa diyaaradaha ah, shirkad leh dukaamada waaweyn ee faracyada badan. shirkaddo haasina waxay ku heshiiyaan qiime dhimis xad-dhaaf ah oo ay macaamiishooda u sameeyaan. qiimo-dhimis taas oo aysan u babac dhigi karin in ay sameeyaan hal iyo labo shirkaddood. waxaana dhacda in marka qoys shirkadahaas xulufada ah midkood macbiil u ah uu damco in uu alaab cusub dhigto, ayna dhacdo in dukaanka haya alaabta uu doonayo uu ka mid yahay shirkaddaha gaashaan buurta ah, waxaa sida qaalibka ah dhacda in qoys kaasi helo qiime dhimis 30% ilaa 60% ah oo ay lacag kumanaan ahi sidaas ugu baaqato.Coupon -ka amase qiima dhimista ugu sareysa waxaa bixiya iskaashatooyinka shaqaalaha. qiime dhimista iskaashatooyinku ay dadka xubnaha ka ah siiyaan, ayna ku soo jiitaan shaqaaluhu in ay ka mid noqdaan waxay ku xirantahay hadba shirkadu inta ay le'eg tahay. qiime dhimista ugu jabana waxaa hela xubnaha iskaashatooyinka shirkadaha waaweyn. faa'iidooyinka tigidka diyaarada bisha fasaxa oo lagaa dhimo 70% iyo gebi ahaanba kaarka xubinnimada xarumaha isboortiga oo bilaash lagugu siiyo. sida kan cayaarta dabaasha, teniska, kubada cagta, golf iyo cayaarta ku shabaaxida hubka fudud sida bastooladaha ama qoriga. iskaashatooyinka shaqaaluhuna waa ay ka awood badan yihii dadka macaamiisha u ah shirkaddaha xulufada ah. bacdamaa ay yihiin dad badan oo aad u abaabulan oo maamulka degaanka iyo xukuumadda dalka ka arimisaba awood siyaasadeed ku leh.Kaarka xubnaha iskaashatooyinka iyo kan macaamiisha shirkadaha gaashaanbuurta ah oo u samaysan qaabka kaararka bangiyadu ay bixiyaan ee lacagta lagula baxo waxna lagu gato, waa nooc ka mid ah waxa loogu yeero afka qalaad "Coupon" oo macnaheedu yahay qiima dhimis. dadka kaararka noocaas ah haystana haba kala sad roonaadeen'e waxaa sanadkii u baaqata lacag aan yarayn. hase ahaatee nooca Coupon-nada ugu caansan waa kuwa ku dul yaala cabitaanada, cuntooyinka iyo nooc kasta oo jaraa'idada ka midka ah. dad kuna intay soo goostaan waxa ay rabaan qiimaha loogaga dhimo. laakiin habkaas waxaa la ogaadey in uusan faa'iido lahayn oo dadka daneeyaa ay yaryihiin, shirkadaha lacagta ku bixiya oo macaamiil doonka ahna ay ku hungoobaan oo ay lacagi uga lunto.Hadaba [Andrew Mason] muxuu soo kordhiyey?, Andrew Mason waxaa lagu xasuusan doonaa in uu yahay ninkii ugu horeeyey oo habka ganacsiga ee ku salaysan qiimo-dhimista horumariyey, internet kana ku baahiyey. sababtana u noqday in habka ganacsiga ee qiimodhimista "Coupon" ay ka gaaraan shirkadduhu ujeedooyinkii ay ka lahaayeen. oo ahayd cadadka macaamiishooda in ay kordhiyaan oo ay macaamiil cusub ku kasbadaan qiimo dhimista. waxaana mudo gaaban oo bilo ah shirkadda Groupon ay noqotay shirkad caanbaxday, oo marka dadku cumputer kooda ama taleefan kooda gacanta ay internetka ka galaan ay kula kulmaan. kana helaan badeeco aad loo jebiyey qiimaheeda oo magaalada amase xaafadda ay deganyihiin ay ka heli karaan. shirkadda (Groupon) waxay sanad gudihiis noqotay shirkad daqli saafi ah oo $350 milyan ah u soo xerootay. hanti daas oo (Groupon) ka soo gala 25% ay ka qaadato daqli kasta oo ay keenaan macaamiisha ay keento. Ganacsiga Maayadda "E-commerce" Iyo Adeegsiga Ganacsatada Reer TanadlandShirkadda [Eby Inc] oo u aas-aasay nin iraniyan ah oo dhalasho faransiis ah haysta lana yiraahdo (Pierre Omidyar), xirfad diisuna ay tahay computer programer. dhidibadana loo taagey mudo haatan 15 sanaddood laga joogo oo ahayd (03.09.1995). maanta waa shirkad suuqyada shirkadaha waaweyn ee (NASDAQ) iyo (S&P 500) ka diiwaan gashan, oo daqligeedu sanadkii 2009 ahaa saafi US$2.389 bilyan. mishiinada waxaas oo maaliyad ah ay ku samaysaana waa "an online auction and shopping website" shaashad xaraash iyo shaashad kale oo ah suuq dadku ay wax ku kala iibsadaan. shirkadda (Google Inc) oo ah shirkadda ugu weyn shirkaddaha aalada "E-commerce" ganacsiga maayada wax ku tabcada, waa shirkad qiimeheedu yahay US$ 40.497 bilyan. macaashka nadiifka ah ee u soo xerooday sanadkii 2009 kana wuxuu ahaa US$6.520 bilyanDulucda Qormada:-Boqolaal sano oo tegey waxaa dhaqan u ahayd umadda karaamaysan ee Tanadland in gabadha iyo wiilka reer tanadland marka ay reer awowgood u tagaan, oo ayeeyo oodkac iyo dhoqol caanaa isugu darto. awoowe wuxuu u raacin jirey sheeko taariikhi ah oo aysan caruurtu iloobin kuna ay seexdaan kuna ay soo toosaan iyaga oo maanka ku haya. sheekada caruurta reer Tanadland looga sheekayn jirey welina looga sheekeeyaa waa baadida dibooda uga maqan boqolaalka sanadood loona baahan yahay in umadda Tanadland dib loogu soo celiyo. sheekadu waxay ku saabsantahay baadida maqan qiimaha ay leedahay, sidii umadda Tanadland ay ku heshay iyo sidii ay uga luntay. baadida umadda Tanadland ka maqanna aniga sidaas si lamid ah ayey awoowe yaashey iigu sheegeen. sidaan ognahayna waa boqortooyadii horumarka looga bartay ee (Tanaad). Gabadha iyo wiilka reer Tanadland meel kasta oo ay dunida ka joogaan marka ay helaan hanti maaliyadeed oo ay damcaan in ay ganacsi ku furtaan, waxa ay ugu jecel yihiin in ay ganacsigaas u bixiyaan waa (Tanaad). maxaa wacay?. Tanaad mar waa magaceenii, marna waa ducadeenii, marna waa saldanad deenii, marna waa taariikh deenii, marna waa dhaqan waxqabsi iyo horumar umaddihii hore ee Tanaad looga bartay, oo jiilalkii danbe ka lumay loona baahanyahay in dib loo dhaqan geliyo. sidaas darteed Tanadland waa falsafad umaddeed oo soojireen iyo dhaxalba ah. caadi ahaan 10 -kii shirkaddood oo ay dadka reer Tanadland leeyihiin mid waa in ay magaceedu noqotaa (Tanad) ama (Tanaad). Tusaale ahaan dalweynaha shiinaha magaalada ganacsiga ku caanbaxday ee (Yiwu Trade City) waa suuqa aduunka ugu weyne oo alaabta jimlada looga qaato. waana magaalada ganacsatada ugu badan ee reer Tanadland iyo Soomaalida kaleba ay ku xiran yihiin. magaalada (Yiwu) dhawr shirkadood oo ganacsatada reer Tanadland ay leeyihiin ayaa xarumahoodu ay ku yaalaan. shirkadda ugu horeysey oo magaalada (Yiwu) xarun ka dhigatayna saad intiin badan ogtihiin waa shirkadda faracyada badan ee beesha (Bihni-weydow). Shirkadda (Tanad Trading Co.Ltd) waxay magaalada ganacsiga ee (Yiwu) xarun ku lahayd 27 sanadood.1) Faraca 1aad Ee Shirkadda (Tanad Trading Co.Ltd)Street : Jiang Dong SI Qu 66 Dong 3 HaoCity : Yiwu Trade CityProvince : ZhejiangCountry : ChinaZip : 322000Shaqaalaha shirkadda 23 qofood.Telephone:86-579-85213791Fax:86-579-85213790Mobile Phone:13174904975CEO: Dr. Ali Osman Koshin2) Faraca 2aad Ee Shirkadda (Tanad Trading Co.Ltd)TANAD TRADING (L.L.C)Dubai (United Arab Emirates)P.O.Box: 64435Phone: 04009712260265 Fax: 04009712262365CEO: Dr. Ali Osman KoshinGanacsato aad u farabadan oo reer Tanadland ah ayaa waayadii hore sida la'ii sheegay magaalada (Yiwu) si joogto ah u imaan jirtey, balse 10 kii sanadood ee ugu danbeeyey socodkii waa u yaraaday ganacsigii ganacsatada reer Tanadland na waa siyaadey. waxaana ugu wacan laba arimood. 1) ganacsatada reer tanadland hada waxay tagaan (Yiwu) marka ay heshiis saxiixayaan oo keliya, marka ay alaab u baahdaana waxay soo dirsadaan dalab. 1) arinta kale ee sida ay ganacsatadu sheegeen arimo badan u sahashay waa 10 sano ka hor magaalada soomaalidu ay ganacsiga ugu balaaran ee dalka shiinaha ay la leedahay xawaaladi ugama furayn. laakiin sidii ay xawaaladda (Tawakal Express) xarun uga furatay (Yiwu) ganacsatada iyo ardayda Soomaaliyeed isbedel horumar ah ayey ku talaabsadeen. Arinta kale oo xusida mudani waxa weeye qofka reer Tanadland oo waliba dadkiisa xogtooda ganacsi xogogaalka u ah marka uu tago magaalada (Yiwu) wuxuu ku arkayaa wax ka yaabiya, marna uu u qushuuco oo farax geliya. waxaasina waa baadidii umada Tanadland boqolaalka sanadood ka abaadey oo u muuqata. qofka reer Tanadland marka uu magaalada (Yiwu) tago oo u wax ilaaleeyo wuxuu ogaanayaa awooda dhaqaale ee ay beecmushtariga reer Tanadland leeyihiin. wuxuu kaloo ogaanayaa midnimadooda, istaakuleynta iyo wadashaqayn toodu inta ay gaarsiisan tahay. wuxuu kaloo ogaanayaa sida ay xarumaha ganacsi ee dibed-jooga reer Tanadland caalamka ugu baahsan yihiin. umadda karaamaysan ee reer Tanadland waxay yaqiinsadeen in ay yihiin dad beecmushtariga ku wanaagsasan. sumcad daas oo ay ku kasbadeen isbaritaar iyo wadashaqayn.Laakiin dhaliisha jirta oo dulucda qormadana ah ayaa waxay tahay reer Tanadland malaha haba yaraatee shirkad aaladda nooc kasta oo cumputer ah lagu dhaqaajiyo "Software Engineering Companay", mana laha reer Tanadland shirkad ka mushtarta adeegsiga farsamada cusub ee warbaahinta "IT Company". taas oo ah waxa uu ku salaysan yahay habka beecmushtariga cusub ee dunida "E-commerce". shirkad muhiimad deeda 1-aad ee lagu qiimeeyaa maahan hanti intee le'eg ayey haysataa?. ee waxaa lagu qiimeeyaa hogaanka iyo shaqaale heeda aqoon tooda waxtarka ay leedahay iyo waxa ay soo saari karaan. Tanadland aqoonyahan xirfad dooodu ay sarayso oo hawlahaan looga danbeeyo oo an yarayn bay leedahay, quruumo kale baase aqoon tooda dheefsada oo ay u shaqeeyaan.Marka ganacsatada iyo gudiga fulinta qorshaha qaranka waxaa la gudboon oo abaartooda ah in ay aqoonyahanka hawlahaas ku shaqada leh ay ururiyaan, oo ay meel isugu geeyaan markaasna ay qorshe jiheyn ah iyo maalgelin ugu sameeyaan si ay u abuurmaan shirkaddaha muhiimka ah. Loogana baahan yahay in lagu soo xero geliyo baadida qaranka ee ay bidhaan teedu inoo muuqato. baadida qaranka ee inaga maqan maaha wax umadda karaamaysan ee Tanadland ay moogtahay, boqolaal shirkaddood oo magac iyo maamuus leh baana ku magacaaban.Labada shirkaddood oo magacaas la baxayna waxaa ugu danbeeyey intaan ogahay shirkadda faracyada badan ee (Tanad Computters LTD). faracyadana ku leh magaalooyinka (Nairobi), (Daresalaam) iyo (Kampala). oo u leeyahay nin ganacsade weyn oo caan ah uu la dhashay oo la yiraahdo (Cabdirisaaq Fakad). shirkadda kaleetana waa shirkadda gaadiidka ee (Tanad Transport company) oo ku taala magaalada Sandiego oo ka mid ah meelihii dadka qaxootiyada ah aadka loogu daadiyey. shirkad daas oo ah intaan ka war qabo shirkadda 3-aad ee gaadiidka oo magaca baadida qaranka sidata. oo ay ganacsatada reer Tanadland US ku leeyihiin.2) Tanad Transport 7364 El Cajon BlvdSan Diego CA 92115 (USA)Tel: 619-303-2628CEO: Mr. Osman RobleHalkani Waa Codka Wadaniga Xalaasha Ah Ee Umadda Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland. By: Saxardiid Xareed Bulxan